लूका १७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१७ तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “ठेस पुऱ्याउने कारणहरू अवश्य आउनेछन्‌। तर त्यस मानिसलाई धिक्कार छ, जसद्वारा ती आउँछन्‌! २ त्यस्ताले गर्दा यी सानाहरूमध्ये एक जनालाई ठेस पुग्न दिनुभन्दा त त्यस्ताको घाँटीमा जाँतो झुन्ड्याएर समुद्रमा फालिदिनु नै बेस हुनेछ। ३ आफ्नो विषयमा ध्यान देओ। तिम्रो भाइले पाप गऱ्यो भने उसलाई हप्काऊ र उसले पश्‍चात्ताप गऱ्यो भने उसलाई क्षमा देऊ। ४ यदि उसले तिम्रो विरुद्धमा दिनको सात चोटि पाप गऱ्यो र सातै चोटि आएर ‘मलाई पछुतो लाग्यो’ भन्छ भने तिमीले उसलाई क्षमा दिनै पर्छ।” ५ तब प्रेषितहरूले प्रभुलाई भने: “हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्।” ६ अनि प्रभुले भन्नुभयो: “तिमीहरूसित रायोको गेडा जत्रो मात्र विश्वास छ भने तिमीहरूले यस किम्बुको रूखलाई ‘उखेलिएर समुद्रमा रोपिन जा’ भन्यौ भने त्यसले तिमीहरूको कुरा मान्नेछ। ७ “तिमीहरूमध्ये कोचाहिं यस्तो होला, जसले आफ्नो दास हलो जोतेर वा भेडाबाख्रा चराएर खेतबाट फर्केपछि उसलाई यसो भन्छ: ‘तुरुन्तै यहाँ आएर खान बस’? ८ बरु के उसले यसो भन्दैन र: ‘मेरो लागि बेलुकीको खाना तयार पार अनि मैले खानपिन नगरुन्जेल पटुका कसेर मेरो सेवा गर। त्यसपछि मात्र तिमीले खानपिन गर्नू’? ९ दासले आफूलाई अह्राइएको काम पूरा गर्दा के मालिकले दासप्रति कृतज्ञ महसुस गर्छ र? १० त्यसैगरि तिमीहरू पनि जब आफूलाई अह्राइएको सबै काम पूरा गर्छौ, तब यसो भन्नू: ‘हामी निकम्मा दासहरू हौं। हामीले त आफूले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो मात्र गरेका हौं।’ ” ११ तब उहाँ सामरिया र गालीलको बीचबाट भएर यरूशलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो। १२ अनि कुनै एउटा गाउँभित्र पस्नलाग्दा दस जना कुष्ठरोगीले उहाँलाई देखे तर तिनीहरू टाढै उभिए १३ र ठूलो स्वरमा यसो भने: “हे येशू, हे गुरुज्यू, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्!” १४ अनि तिनीहरूलाई देखेपछि उहाँले यसो भन्नुभयो: “जाओ, गएर पुजारीहरूलाई देखाओ।” तब जाँदाजाँदै तिनीहरू शुद्ध भइहाले। १५ तिनीहरूमध्ये एक जनाले जब आफू निको भएको देख्यो, तब चर्को स्वरमा परमेश्वरको महिमा गर्दै उहाँकहाँ फर्क्यो १६ र येशूको पाउमा घोप्टो परेर उहाँलाई धन्यवाद दियो। ऊ सामरी थियो। १७ यो देखेर येशूले भन्नुभयो: “शुद्ध हुने त दस जना थिए नि, होइन र? त्यसोभए, बाँकी नौ जना खै त? १८ परमेश्वरको महिमा गर्न फर्किआउनेमा यो विदेशीबाहेक अरू कोही भएन?” १९ अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “उठ र आफ्नो बाटो लाग। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” २० तब परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनी फरिसीहरूले सोध्दा, उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “परमेश्वरको राज्य सबैले देख्ने गरी आउँदैन। २१ न त मानिसहरूले ‘हेर, यहाँ छ!’ वा ‘त्यहाँ छ!’ भन्नेछन्‌। किनकि हेर, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै माझमा छ।” २२ त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “यस्तो समय आउनेछ, जब तिमीहरूले मानिसको छोराका दिनहरूमध्ये एक दिन हेर्न इच्छा गर्नेछौ तर तिमीहरूले देख्न पाउनेछैनौ। २३ अनि मानिसहरूले तिमीहरूलाई ‘हेर, त्यहाँ छ!’ वा ‘हेर, यहाँ छ!’ भन्नेछन्‌। तर तिमीहरू बाहिर नजाओ वा तिनीहरूको पछि-पछि नलाग। २४ जसरी बिजुली चम्कँदा आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म देखिन्छ, मानिसको छोरा पनि त्यसरी नै प्रकट हुनेछ। २५ तर पहिला, उसले धेरै दुःख भोग्नुका साथै यस पुस्ताबाट तिरस्कृत हुनु आवश्यक छ। २६ यसबाहेक, नूहको दिनमा जस्तो भएको थियो, मानिसको छोराको दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ: २७ जुन दिनसम्म नूह जहाजभित्र पसेनन्‌, त्यस दिनसम्म तिनीहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए अनि विवाह गर्दै र गराउँदै थिए, तब जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई नाश गऱ्यो। २८ त्यसैगरि, लूतको दिनमा जस्तो भएको थियो, त्यतिखेर पनि त्यस्तै हुनेछ: तिनीहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, किन्दै थिए, बेच्दै थिए, रोप्दै थिए, बनाउँदै थिए। २९ तर जुन दिन लूत सदोमबाट निस्के, त्यही दिन आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षेर तिनीहरू सबैलाई नाश गऱ्यो। ३० मानिसको छोरा प्रकट हुने दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। ३१ “त्यो दिन कुनै मानिस कौसीमा छ र उसको मालसामान घरभित्र छ भने त्यो लिन ऊ तल नओर्लोस्। त्यसैगरि खेतमा भएको मानिस आफ्नो मालसामान लिन घर नफर्कोस्। ३२ लूतकी पत्नीलाई सम्झ! ३३ जसले आफ्नो ज्यान* बचाउन खोज्छ, उसले त्यो गुमाउनेछ तर जसले गुमाउँछ, उसले त्यो जोगाउनेछ। ३४ म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यस रात दुई जना पुरुष एउटै खाटमा हुनेछन्‌; एक जना लगिनेछ अनि अर्को छोडिनेछ। ३५ दुई जना स्त्री एउटै जाँतो घुमाइरहेका हुनेछन्‌; एक जना लगिनेछ अनि अर्को छोडिनेछ।” ३६ *— ३७ यो सुनेर तिनीहरूले उहाँलाई सोधे: “कहाँ, प्रभु?” उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जहाँ लास हुन्छ, त्यहाँ चीलहरू पनि भेला हुनेछन्‌।”
^ लूका १७:३३ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ लूका १७:३६ * विभिन्न प्रमुख पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यस पदमा यस्तो लेखिएको छ: “दुई जना पुरुष खेतमा हुनेछन्‌; एक जना लगिनेछ अनि अर्को छोडिनेछ।”